ဗီယက်နမ်ရဲ့ UNESCOစာရင်းဝင် အမျိုးသမီးကို ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ - For her Myanmar
ဗီယက်နမ်ရဲ့ UNESCOစာရင်းဝင် အမျိုးသမီးကို ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ
Knowledge>Tradition, News>Women News
အမျိုးသားဝါဒီ အားကောင်းတဲ့ ခေတ်မှာတင် အမျိုးသမီးတွေကို အလေးပေးခဲ့ကြတဲ့ ဗီယက်နမ်တွေရဲ့ ကိုးကွယ်မှုက….
ဗီယက်နမ်ဟာ လေ့လာစရာစုံလင်လှတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ရင်သပ်ရှုမောစရာ သဘာဝ တောတောင်ရေမြေတွေရယ်၊ သူတို့ရဲ့ ရှေးဟောင်း သရုပ်လက္ခဏာတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာတွေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာရယ် ကြောင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ မွေ့လျော်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ UNESCO က ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရတဲ့အထိ ထူးခြားတဲ့ ဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေရဲ့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတစ်ခုအကြောင်း ယောင်းတို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ Dao Mau လို့ခေါ်တဲ့ အလွန်တရာရှေးကျပြီး အမျိုးသမီးတွေကို ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှူ ဖြစ်လာတာလေးက ထူးခြားပါတယ်။ ရှေးခေတ်တုန်းက ကွန်ဖြူးရှပ်အယူဝါဒဟာ အလွန်ခေတ်စားတာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ ယောကျာ်းတွေကို နာခံရတဲ့၊ မှီခိုရတဲ့၊ ယောကျာ်းတွေလောက် အရေးမပါတဲ့၊ လေးစားမခံရတဲ့ သူတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
Related Article >>> မုဆိုးမကို မီးရှို့တဲ့ ဆတ္တီးဓလေ့အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
ဒါပေမဲ့ ဗီယက်နမ်လူမျိုးတချို့ဟာ “အမျိုးသမီးတွေလည်း ယောကျာ်းတွေလို အရေးပါတဲ့သူ၊ တန်းတူညီမျှလေးစားထိုက်တဲ့သူ၊ စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်” လို့ ယူဆလာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွန်ဖြူးရှပ်အယူဝါဒ မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ အရည်အသွေးကို ကိုယ်စားပြုမယ့် အယူဝါဒအသစ်တစ်ရပ်ကို ဖန်တီးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် ၁၆ရာစုလောက်ကစပြီး Dao Mauဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနတ်ဘုရားကို ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာပေါ်လာပါတယ်။ အမျိုးသမီးနတ်ဘုရား ရဲ့ နာမည်ကို Lieu Hanhလို့ ပေးခဲ့ကြပြီး သူ(မ)ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကတော့ နတ်ဘုရားအဖြစ်ကနေ ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို ဆင်းသက်လာပြီး သာသနာ့ဘောင်ထဲ ဝင်ခဲ့သူလို့ ဆိုပါတယ်။ သူမဟာ ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရဲရဲတောက် သတ္တိ၊ အမှီအခိုကင်းမှု၊ လွတ်မြောက်မှုနဲ့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်တဲ့။
ဒီလို အမျိုးသမီးကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဟာ အယူသည်းတယ်လို့ ထင်မှတ်ခံရတာကြောင့် အရင်တုန်းကတော့ လယ်သမားတွေနဲ့ အလုပ်သမားလူတန်းစားကြားမှာပဲ အများဆုံးရှိခဲ့ပြီး ကွန်မြူနစ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကပါ ၁၉၈၇ အထိ ပိတ်ပင်ထားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်လည် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာ UNESCOစာရင်းထဲ ပါသွားတဲ့ အခါမှာတော့ အမျိုးသမီးနတ်ဘုရား ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေ တစ်ရှိန်ထိုး မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ Lieu Hanh တင်မဟုတ် တခြားအမျိုးသမီးတွေကိုပါ နတ်ဘုရားအသွင် ဖန်တီးပြီး ကိုးကွယ်လာခဲ့ပါတယ်။
Related Article >>> ကြောင်နက်လေးတွေက ယူဆောင်လာပေးနိုင်တဲ့ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်များ
အရင်တုန်းကလို ဗီယက်နမ်လယ်သမား၊ အလုပ်သမားတွေတင်မကဘဲ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ သူဌေးကြီးတွေ၊ အဆင့်မြင့် အစိုးရ အရာရှိတွေကပါ အမျိုးသမီးနတ်ဘုရားတွေကို ကံကောင်းခြင်းတွေ ဆောင်ကြဉ်းပေးတဲ့၊ စိတ်ခွန်အားကို ယူဆောင်ပေးတဲ့သူ အဖြစ် ကိုးကွယ်လာကြပါတယ်။
အမျိုးသားကြီးစိုးတဲ့ ၁၆ရာစုခေတ်ကတည်းက အမျိုးသားတွေကို အလေးပေးတဲ့ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒကို ပစ်ပယ်ရဲပြီး အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ဘာသာကို ခုထိ ထိန်းသိမ်းလာနိုင်တာဟာ အင်မတန် ချီးကျူးစရာပါပဲ။ ဒါဟာ ဗီယက်နမ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအပေါ် အလေးပေးမှု နဲ့ လေးစားမှုကို ထင်ထင်ရှားရှား ပြသနေပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာဆို Dao Mauကို ထိန်းသိမ်းအပ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အနေနဲ့ ပြဇာတ်ရုံပေါ်က စင်မြင့်ပေါ်အထိ တင်ဆက်ပြသလာခဲ့ပါတယ်။ ယောင်းတို့လည်း ဗီယက်နမ်က ဟနွိုင်းကို သွားလည်တဲ့အခါ လေ့လာခဲ့ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
Reference links: CNN Ichcourier Mena Travel Agency Learning Educate Together
အမြိုးသားဝါဒီ အားကောငျးတဲ့ ခတျေမှာတငျ အမြိုးသမီးတှကေို အလေးပေးခဲ့ကွတဲ့ ဗီယကျနမျတှရေဲ့ ကိုးကှယျမှုက….
ဗီယကျနမျဟာ လလေ့ာစရာစုံလငျလှတဲ့ နိုငျငံဖွဈပွီး ရငျသပျရှုမောစရာ သဘာဝ တောတောငျရမွေတှေရေယျ၊ သူတို့ရဲ့ ရှေးဟောငျး သရုပျလက်ခဏာတှေ၊ ယဉျကြေးမှုအစဉျအလာတှကေို ထိနျးသိမျးထားနိုငျတာရယျ ကွောငျ့ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားတှေ မှလြေ့ျောတဲ့ နိုငျငံတဈနိုငျငံပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ UNESCO က ရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှု အမှအေနှဈ အဖွဈ အသိအမှတျပွုရတဲ့အထိ ထူးခွားတဲ့ ဗီယကျနမျလူမြိုးတှရေဲ့ ကိုးကှယျရာ ဘာသာတဈခုအကွောငျး ယောငျးတို့ကို မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။
အဲ့ဒါကတော့ Dao Mau လို့ချေါတဲ့ အလှနျတရာရှေးကပြွီး အမြိုးသမီးတှကေို ကိုးကှယျတဲ့ ဘာသာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီ ကိုးကှယျယုံကွညျမှူ ဖွဈလာတာလေးက ထူးခွားပါတယျ။ ရှေးခတျေတုနျးက ကှနျဖွူးရှပျအယူဝါဒဟာ အလှနျခတျေစားတာကွောငျ့ အမြိုးသမီးတှဟော ယောကျြားတှကေို နာခံရတဲ့၊ မှီခိုရတဲ့၊ ယောကျြားတှလေောကျ အရေးမပါတဲ့၊ လေးစားမခံရတဲ့ သူတှေ ဖွဈလာပါတယျ။
Related Article >>> မုဆိုးမကို မီးရှို့တဲ့ ဆတ်တီးဓလအေ့ကွောငျး တဈစတေ့ဈစောငျး
ဒါပမေဲ့ ဗီယကျနမျလူမြိုးတခြို့ဟာ “အမြိုးသမီးတှလေညျး ယောကျြားတှလေို အရေးပါတဲ့သူ၊ တနျးတူညီမြှလေးစားထိုကျတဲ့သူ၊ စှမျးဆောငျနိုငျတဲ့သူ ဖွဈတယျ” လို့ ယူဆလာကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကှနျဖွူးရှပျအယူဝါဒ မဟုတျဘဲ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ စှမျးဆောငျနိုငျစှမျးနဲ့ အရညျအသှေးကို ကိုယျစားပွုမယျ့ အယူဝါဒအသဈတဈရပျကို ဖနျတီးဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ ၁၆ရာစုလောကျကစပွီး Dao Mauဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးနတျဘုရားကို ကိုးကှယျတဲ့ ဘာသာပျေါလာပါတယျ။ အမြိုးသမီးနတျဘုရား ရဲ့ နာမညျကို Lieu Hanhလို့ ပေးခဲ့ကွပွီး သူ(မ)ရဲ့ ဇာတျကွောငျးကတော့ နတျဘုရားအဖွဈကနေ ကမ်ဘာမွပေျေါကို ဆငျးသကျလာပွီး သာသနာ့ဘောငျထဲ ဝငျခဲ့သူလို့ ဆိုပါတယျ။ သူမဟာ ဗီယကျနမျအမြိုးသမီးတှရေဲ့ ရဲရဲတောကျ သတ်တိ၊ အမှီအခိုကငျးမှု၊ လှတျမွောကျမှုနဲ့ ပြျောရှငျဝမျးမွောကျမှုကို ကိုယျစားပွုပါတယျတဲ့။
ဒီလို အမြိုးသမီးကို ယုံကွညျကိုးကှယျမှုဟာ အယူသညျးတယျလို့ ထငျမှတျခံရတာကွောငျ့ အရငျတုနျးကတော့ လယျသမားတှနေဲ့ အလုပျသမားလူတနျးစားကွားမှာပဲ အမြားဆုံးရှိခဲ့ပွီး ကှနျမွူနဈအစိုးရကိုယျတိုငျကပါ ၁၉၈၇ အထိ ပိတျပငျထားခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဒါပမေဲ့လညျး နောကျပိုငျးမှာ ပွနျလညျ ခှငျ့ပွုပေးခဲ့ရပွီး ၂၀၁၆ခုနှဈမှာ UNESCOစာရငျးထဲ ပါသှားတဲ့ အခါမှာတော့ အမြိုးသမီးနတျဘုရား ကို ယုံကွညျကိုးကှယျတဲ့သူတှေ တဈရှိနျထိုး မွငျ့တကျလာခဲ့ပါတယျ။ Lieu Hanh တငျမဟုတျ တခွားအမြိုးသမီးတှကေိုပါ နတျဘုရားအသှငျ ဖနျတီးပွီး ကိုးကှယျလာခဲ့ပါတယျ။
Related Article >>> ကွောငျနကျလေးတှကေ ယူဆောငျလာပေးနိုငျတဲ့ ကံကောငျးခွငျးလကျဆောငျမြား
အရငျတုနျးကလို ဗီယကျနမျလယျသမား၊ အလုပျသမားတှတေငျမကဘဲ လုပျငနျးရှငျတှေ၊ သူဌေးကွီးတှေ၊ အဆငျ့မွငျ့ အစိုးရ အရာရှိတှကေပါ အမြိုးသမီးနတျဘုရားတှကေို ကံကောငျးခွငျးတှေ ဆောငျကွဉျးပေးတဲ့၊ စိတျခှနျအားကို ယူဆောငျပေးတဲ့သူ အဖွဈ ကိုးကှယျလာကွပါတယျ။
အမြိုးသားကွီးစိုးတဲ့ ၁၆ရာစုခတျေကတညျးက အမြိုးသားတှကေို အလေးပေးတဲ့ ကှနျဖွူးရှပျဝါဒကို ပဈပယျရဲပွီး အမြိုးသမီးတှကေို ကိုယျစားပွုတဲ့ဘာသာကို ခုထိ ထိနျးသိမျးလာနိုငျတာဟာ အငျမတနျ ခြီးကြူးစရာပါပဲ။ ဒါဟာ ဗီယကျနမျလူ့အဖှဲ့အစညျးရဲ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍအပျေါ အလေးပေးမှု နဲ့ လေးစားမှုကို ထငျထငျရှားရှား ပွသနပေါတယျ။
အခုနောကျပိုငျးမှာဆို Dao Mauကို ထိနျးသိမျးအပျတဲ့ ယဉျကြေးမှုအမှအေနှဈအနနေဲ့ ပွဇာတျရုံပျေါက စငျမွငျ့ပျေါအထိ တငျဆကျပွသလာခဲ့ပါတယျ။ ယောငျးတို့လညျး ဗီယကျနမျက ဟနှိုငျးကို သှားလညျတဲ့အခါ လလေ့ာခဲ့ဖို့ မမနေဲ့နျော။
Tags: Dao Mau, Knowledge, Lieu Hanh, News, Tradition, women, Women News, Worship
Aye Mon Kyaw July 13, 2018